Nhau - Nei uchisarudza bhodhoro repurasitiki?
Mumusika wekutakura zvinhu, kunyangwe zvizorwa akapfapfaidza bhodhorokavha zvinhu zvakasiyana-siyana, epurasitiki pfapfaidzo mabhodhoro ndiwo sarudzo yekutanga yevatengi kusarudza mabhodhoro ekupfapfaidza. Nei vatengi vachida mabhodhoro epurasitiki pavanosarudza mabhodhoro ekupfapfaidza? Nekutimabhodhoro epurasitiki vane zvinotevera zvakanakira vatengi:
1.Purasitiki zvinhu, chakareruka uye zviri nyore kutakura;
2.Kuchienzaniswa negirazi uye simbi yekumwaya mabhodhoro, mabhodhoro epurasitiki zviri nyore kuumba uye kugadzira zvigadzirwa izvo vatengi vanoda zviri nyore;
3. Mutengo wacho wakadzikira pane zvimwe zvinhu, uye iro giredhi repaketi harirasike;
4.Kuenzaniswa nezvimwe zvinhu, chipfapfaidzo chichava chakapfava. Sezvo ipurasitiki pachayo iri yakapfava, muviri webhodhoro unozodzikira kana uchimwaya, ichigadzira simba rekukomberedza, ichiita kuti chipfira chiwedzere uye chakareba;
5. Icho hachikurumidzi kubuda. Musoro wepombi unowanzo kuve wakagadzirwa nezvinhu zvepurasitiki, uye chimiro chakatenderera pakati pepurasitiki nepurasitiki chakavharwa zvakanyanya uye chakasimba, chakanyatso kukiya mhepo, uye chisinganyanyi kubuda. Iko kusagadzikana kwemhepo kwepurasitiki nezvimwewo zvinhu zvakati svibei, uye zvimwe zvinhu zvakasviba uye zvakaoma kusimbisa;
6. Kudhura kwemitengo. Mapurasitiki epurasitiki mabhodhoro kuuraya zvimwe zvinhu maererano nemutengo mashandiro.
Shanghai Rainbow Industrial Co, Ltd ndiye mugadziri, Shanghai muraraungu pasuru Ipa imwechete-yekumira yekuzora kuputira.Kana iwe uchida zvigadzirwa zvedu, unogona kutibata nesu,